IChiefs imanqika ngesilomo somgadli - Ilanga News
Home Ezemidlalo IChiefs imanqika ngesilomo somgadli
Kuthiwa ingase imthenge ngetshe lemali uLetsoalo
Ingase ihoxe iKaizer Chiefs ukulanda umgadli ebimfuna uthuli njengoba kuvela ukuthi sekufanele imthenge ngetshe lemali kanti yona ibibheke ukumthatha mahhala. IChiefs kuvela ukuthi ifuna phansi phezulu uVictor Letsoalo (29) (osesithombeni) ongumgadli weRoyal AM. Bekusabalele imibiko ethi inkontileka yalo mdlali iyaphela uma kusongwa isizini kanti inesivumelwano sokuyelula ngomunye unyaka. Kuthiwa iRoyal AM ivele yaselula lesi sivumelwano okusho ukuthi inkontileka yalo mdlali isizophela uma kusongwa isizini ezayo. Lokho kuchaza ukuthi ofuna lo mgadli kufanele ashaye indesheni kwiRoyal AM, abeke etafuleni afuna ukumthenga ngakho bese kubonakala ukuthi kuyavunyelwana yini. Umthombo waleli phephandaba ulitshele ukuthi iChiefs ingase ihoxe ekusayiniseni lo mdlali kwazise ibingabhekile ukumkhiphela imali ibimfuna mahhala.
“Yinkinga yeChiefs endala ukugodola nemali, namanje ayifuni ukuzehlisa ihlale phansi nabaphathi beRoyal AM kubhungwe ngodaba lwalo mdlali. “IRoyal AM ayinankinga ukumdayisa inqobo nje uma izothola ekudingayo. “Sizobona ngokuqhubeka kwesikhathi kodwa umfana uyajima laphaya epulazini leRoyal AM, ulinde ukuzwa ukuthi izogcina kanjani indaba yakhe. “Kuzofanele igade iChiefs ngoba iPirates kayicucuzi, kungenzeka imhlwithe lo mfana ngoba kuthiwa nayo imgaqele,’’ kusho umthombo.Leli phephandaba lishayela uVina Maphosa wezokuxhumana kwiChiefs ngalolu daba uthe: “Isiko lethu lapha kwiChiefs wukuthi uma kunento eyenzekayo ethinta abadlali siyaye simemezele ngokusemthethweni ngoba sibalekela le ndaba yokuphawula okuvele kusaphazeke emoyeni. “Okwamanje akukho okwenzekayo ngodaba oluthinta abadlali abezayo, uma sekukhona sizomemezela,’’ kusho uMaphosa.
Previous articleIphenduke ikwajombigazi iKZN kuqothwa inqwaba yabantu
Next articleUxhaswe womasipala owaseSandlwana